8 Qof Oo Internet-ka Caan Ka Dhigay Sanadkaan Sii Dhamaanaya Ee 2014-ka - Daryeel Magazine
8 Qof Oo Internet-ka Caan Ka Dhigay Sanadkaan Sii Dhamaanaya Ee 2014-ka
Sanadkan 2014 oo mid aad u xiiso badan ahaa ayaa waxan idin soo aruurinay 8 qof oo internet-ka caan ka dhigay. Sheekadan oo waayahan aan cusbeyn oo dad badan internet-ka caan ka yihin oona laga yaabo in aysan saaxibo saas u badan laheyn.
1 Maxbuuska Jeremy Meeks
Jeremy Meeks ayaa sawirkan laga qaaday kadib markii ay booliska soo xireen. Waxeyna ku faafiyeen bogga Stockton Police Department ee Facebook. Waxa la sheegay in sawirkan uu heley wax ka badan 100,000 likes. Jeremy ayaa shirkadaha dharka xayeysiiya ay damceen oo kasoo sii dayeen xabsiga ayagoo ka balan qaaday iney ka dhigayan dadka dharka xayeysiiya. Jeremy ayaa mudo aad u yar caan ku noqday.
2 Gabar Yar oo Lo’ Guriga Keensatay
5 jir aad u qurux badan oo lagu magacaabo Breanna ayaa guriga keensatay sac si ay u xananeysato. Hooyadeed ayaa ka duubtay video ayadoo weydineysa sababtey weysha yariiska ah usoo galisay guriga. Breanna ayaa aad caan u noqotay oo xata laga wareystay TVga.
Jasmine Tridevil ayaa aad caan u noqotay kadib markey soo galisay sawir ay 3 naas leedahay, ayadoo sheegatay iney camaliyad gashay sey u sameesato naas sadaxaad taasoo. Sheekadan ayaa markii dambe been noqotay markey Jasmine qiratay iney caag ku dhajisay naasaheeda oo eysan run aheyn.
4 Gabar si Kama Ah Sawir U Dirtay
Gabar lagu magacaabo Nyah Cousar oo 23 jir ah ayaa si kama ah ugu dirtay sawirkeeda oo qaawan aabaheed ayadoo qof kale u waday iney u dirto. Sheekadan ayey isla markiba ku qortay bogeeda Twitter ayadoo tiri ‘Aabahey ayaan sawirkeyga oo qaawan ugu diray si kama ah’. Islamarkiiba waxey hadalkasi noqday mid internetka ku faaha ayadan ay noqotay qof aad caan u ah. Aabaheed ayaa ka xanaaqay arintan oo su’aalahuu weydiyay ka mid ahayeen, maalinti dhan ma waxan ayaad iskuulka ku sameysa? Ma ula jeeday inaad sawirkan isoo dirto? iyo kuwo kale oo badan uu usoo diray markuu helay sawirkeeda taasoo aysan ka jawaabin.
5 Cuniga Noah
Noah Ritter cunig lagu magacaabo ayaa waxa wareysatay gabar wariye ah asagoo ku sugan meel xaflad lagu qabanayay. Noah oo 5 jir ah ayaa aad u noqday caan kadib marku kalmada ‘Apperently’ kusoo celceliyay tasoo micnaheedu yahay ‘Sida cad’. Noah ayaa aad caan u noqday asagoo lasoo fariisay barnaamijyo badan oo Mareykanka telefishinkisa ka baxa.
6 Alex Wiilka Dukaanka
Wiil lagu magacaabo Alex ayaa aad u caan u noqday kadib markey gabar soo sawirtay asagoo ka shaqeynaya dukaanka Target. Sawirkan oo tusinaya asagoo bac wax ku ridaya oo kaashiirka gadashisa taagan ayaa saacado ka yar caan ka noqday internetka isla maalmo kabacdina wiilkan ayaa sawirkisa newska lagu soo qatay asago barnamijiyo caan ahna laga wareystay.
7 Nin Xaaskisa Ka Waaliyay
Haweeneey isticmaasha bogga Reddit oo dadka ku faafiyaan dhacdooyinka ayaa soo galisay waraaq uu ninkeeda usoo diray ayadoo shaqada joogta. Waraaqdan ayaa ku qoran inta goor uu isku dayay ninkeeda inuu la seexdo iyo cudurdaarkeey ka sameeysay. Wuxuu waraaq ku qoray 27 mar uu weydiistay inuu la seexdo waxeyna ogalaatay 3 jeer oo kaliya ayadoo 24 mar ka cudurdaaratay.
8 Wariye Si Toos Ah Shaqada Iskaga Casishay
Haweeney wariye ka ah mid ka mid ah telefishinada maxaliga ee Mareykanka ayaa shaqadeedi iska casishay ayadoo live u warineysa. Kadib markey qiratay iney tahay haweeneyda ka dameysa shirkad iibisa Xashiishka daroogada ah.
Sidee U Kobcin Kartaa Cafimaadka Lafahaaga?
Scrub Dabiici Ah Oo Maqaarka Jirka Ka Dhiga Mid Jilicsan Oo Dhalaalaya
Muufo Si Fudud Foornada Loogu Samaynayo